Shakespeare ndiye munyori wemitambo yako yese here? | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo yaMarlowe (kuruboshwe) naShakespeare (kurudyi)
Mazuva mana chete apfuura vezvenhau vakaratidza nhau inoshamisa mukati memunda wezvinyorwa. Nhau dzakapihwa neBBC neMuvhuro uye izvi zvave zvichitaurwa munhau dzenyika muvhiki rino rese.
Sezviri pachena William Shakespeare angadai asina kunyora chete mimwe mitambo yake ine nhoroondo inonzi yakamunakira uye izvo, nekudaro, zvimwe zveizvi zvaizopa munyori-mubatanidzwa wevamwe vanyori. Kunyanya zvakanyanya, ivo vari kutaura nezvazvo munyori wemitambo Christopher Marlowe ndomumwe weavo vanyori vanyori. Zvinonzwisisika, izvi zvakagara zvichionekwa semunyori mukuru akatungamira Shakespeare pachake.
Uku kutsvagisa na muparidzi weBritish "Oxford University Press" akagumisa izvo, sekufungirwa kubvira muzana ramakore rechiXNUMX, Mitambo mitatu yaMambo Henry VI yaionekwa seya "Bardo", yaizovapo mukati mavo simba rakakura raMarlowe . Izvi, muchidimbu, zvinobvumidza nyanzvi kuti dzitaure nezvekushandirana kunokwanisika pakati pevanyori vaviri.
Pakati peboka revatsvakurudzi, vanomira kunze 23 vevadzidzi vanobva kunyika dzakasiyana. Vese vakagumisa kuti nyaya inotinetsa haisi yechimiro chega kubva ipapo vanopokana kuti Shakespeare aive nerubatsiro kana kubatana kwevanyori vanokwana gumi nemana muhupenyu hwake hwese zvinyorwa.
Mushure memashoko aya, pakange pasina kushaikwa kwemanzwi anokakahadzika pachirevo ichi. Vamwe vanamazvikokota mundima saCarol Rutter, purofesa paUniversity yeWarwick, vanoyambira kuti mhedziso iyi inofanira kutorwa nekuchenjerera uye dzivisa kutanga uchitora sechokwadi kana chechokwadi.
Muzvinafundo wepayunivhesiti anovhara yambiro iyi pachokwadi chekuti, kunyange hazvo ichizivikanwa nekubatana kwaShakespeare mumabasa evamwe vanyori vemazuva ano, Zvakaoma kana kuoma kutenda kuti munyori anonyanya kukosha panguva iyoyo, Marlowe, akabvunza Shakespeare, munyori panguva iyoyo asingazivikanwe, kuti abatsirwe kana kushandira pamwe. mune mamwe emabasa ake.
Tichafanirwa kuchengetedza, nekudaro, tichiteerera kune ramangwana nhau pane iyo nyaya kupedzisa kuongorora kana Shakespeare ari iye chaiye munyori wezvese mabasa ake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Shakespeare ndiye munyori wemitambo yako yese here?
Mabhuku mashanu ane mukurumbira akanyorwa mutirongo
Chinyorwa cheanofanirwa-kuve nemabhuku ekutanga nhasi